Rara Lake, Nepal | रारा ताल–पर्यटकका लागि छुट्टै आकर्षण
Saturday, 22 September 2018 03:44 pm, Nepal
मेचीकाली : 2010-08-09 11:33:37
संसारमा सबैभन्दा नीलो पानी कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने रारा पुगेको जोसुकैले उत्तर दिन्छ- रारा तालमा। रारा नेपालको सबैभन्दा ठूलो तालमात्र होइन, सबैभन्दा बढी कविता लेखिएको ताल पनि हो। भनिन्छ, यहाँ पुगेपछि ढुङ्गाको मन भएकालाई पनि कविता फुर्छ। राराको पानी सधैँ नीलो हुँदैन, पानीले घरीघरी रंग फेरिरहन्छ। आजसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन, ताल भित्र बसेर पानीमा थरीथरीका रंग घोल्ने काम कसले गरिरहेको छ? अर्को अचम्म त के छ भने, तालको पृष्ठभूमि पनि सधैँ एउटै देखिँदैन, बदलिइरहन्छ, सिनेमाको फ्रेम बदलिए जस्तो।
दश हजार फिटको उचाइमा दश वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको यो ताल हेर्दा पानीको निकास देखिँदैन। तालको पश्चिमी सतहको तुलनामा पूर्वी किनारा होचो छ, तर पश्चिमतिरकै अग्लो किनाराबाट पानी बाहिर निस्किन्छ। पहिलो पटक रारा दहमा पुग्दा कुनै दैवी लोकमा आए झै लागेको थियो पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यलाई। रारा पुगेपछि सास पनि रोकेर प्रकृतिमै हराइरहौं जस्तो हुन्छ, सास फेर्दा पनि हल्ला भएजस्तो लाग्छ शाक्यले राराको वर्णन गर्छन्। विषय विविध पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार, डा. हर्क गुरुङलाई घुर्चीलेकबाट रारा हेर्दा बिहानीपख अनन्त आकाश 'र्लने, एउटा ठूलो ऐना जस्तो लागेको थियो।
ताल वरिपरि फन्को लगाउनका लागि गोरेटो पनि छ। स्नो ट्राउट माछा देखिने राराको कञ्चन पानीमा हाँस, जलेवा, कर्‍याङकुरुङ जस्ता चराहरू जलक्रीडामा मग्न हुन्छन्। यात्राको थकाइ मेट्न र बिहानदेखि बेलुकीसम्म राराले फेर्ने विभिन्न रुपको रस लिन एक दिन रारा ताल छेउ विताउनै पर्ने हुन्छ। तालबाहेक निकुञ्ज क्षेत्र पनि घुम्नका लागि राम्रो गन्तव्य हो। यहाँ गुराँस, ब्ल्याक जुनिपर, हिमालयन स्प्रुस, 'क, हिमालयन साइप्रस जस्ता फूलमात्र होइन, कस्तुरी मृग, हिउँ चितुवा, थार, वन भेडा जस्ता दुर्लभ जनावर र स्नो कक, कोग्मु डाँफे, च्याँर, लरुवा, प्युरा जस्ता पन्छीको पनि दर्शन पाइन्छ।
रारा ताल पुग्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो मुगुको ताल्चा विमानस्थल हो। नेपालगञ्जबाट जहाजमा ताल्चा 'र्लिन सकिन्छ। यहाँबाट जम्मा तीन घण्टाको हिँडाइमा रारा पुगिन्छ। तर, राराका साथमा प्रकृतिका अरू छटा र जीवनलाई पनि नजिकबाट नियाल्ने हो भने जुम्लाबाट रारातर्फ पैदल यात्रा गर्नु बेस हुन्छ। नेपालगञ्जबाट जुम्लाको बाटो जाने हो भने लगभग पाचौं दिनमा रारा पुग्न सकिन्छ।
जुम्लाबाट हिँड्नेहरूका लागि डाँफे लाङ्गनामा पहिलो बास उपयुक्त हुन्छ। घुमर्ती हुँदै सिस्नामुलको बाटो लागेेपछि पहिलो दिन नै जङ्गलको रमाइलो लिन सकिन्छ। दोस्रो दिनको गन्तव्य चौथा हो। थारमारा, सिंजा खोलाको किनार हुदै न्याउरेका आलु र गहुँको खेत हेर्दै कभ्रा पुगिन्छ। कभ्रामा एउटा ठूलो ढुङ्गाबाट ढुङ्गाको पसिना भनिने औषधीय गुण भएको शिलाजित निक्लेको समेत देख्न सकिन्छ। गहुँको खेतको बीचमा रहेको तिब्बती गाउँ भरा हुँदै चौथा पुगिन्छ।
क्याम्प अवधिः ५ देखि १२ दिन
आकर्षणः जैविक विविधता
उचित समय: वैशाखदेखि असोज
जम्मा खर्चः लगभग रु.१२,०००
उचाइः २,९८० मि.
तेस्रो दिनको यात्रा धोतु पुगेर टुङ्गिन्छ। यहाँबाट भुलभुले पुगेपछि रारा निकुञ्ज शुरु हुन्छ, तीन घण्टाको हिँडाइ। ताल वरपरको क्षेत्रमा सुरक्षा क्याम्पमात्र छैन, पन्ध्रजनासम्म बस्न मिल्ने होटल पनि छ। होटल पाइएन भने पनि चिन्ता नलिनुस्, पाल टाँगेर रात बिताउनका लागि यो निकै उत्तम ठाउँ मानिन्छ।
एक दिनको विश्रामपछि राराबाट जुम्ला आएकै बाटो फर्कन पनि सकिन्छ तर राष्ट्रिय निकुञ्जको आनन्द लिँदै फर्कने हो भने तालको पश्चिमतर्फबाट खट्यार खोला भएर मजगठ्ठा हुँदै गोरोसिंहा, मल्ल वंशको राजधानी सिंजा र अन्त्यमा जल्जला चौरमा एक-एक रात बिताउँदै जुम्ला पुग्न सकिन्छ। यो यात्रामा कम्तीमा पाँच जनाको समूह भएमा रमाइलो र सुरक्षित हुने पर्यटन व्यवसायी शिवराम बस्नेत बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त खाद्यान्न, बास बस्ने ठाउँ, उद्धार सेवा र यातायातको कमीका कारण यो क्षेत्रको भ्रमण अलि महँगो छ। आवतजावत गर्ने खर्चबाहेक प्रति दिन लगभग हजारदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँ जति खर्च हुने हुनाले यसै अनुसार तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ।
राराबाट हिँड्दै सिमिकोट निक्लिएर नेपालगञ्ज पुग्न पनि सकिन्छ। रारा पुग्न र फर्कन सुर्खेतस्थित विमानस्थल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
rakesh:Sep 4, 2011 04:12:25 PM
त रारा ताल सारै मन पर्यो नेपाल को सोर्ग रहेछ यक चोटी भय पनि रारा घुम्न जान्छु यस्तो ठाउँ पनि रहेछ नेपालमा क्या रमाइलो ठाउँ आ हा आ हा यो ठाउँ मा राम्रो होटेल यातायातको सुबिधा हुनुपर्थ्यो .